Caabuqa Kaadi ee Ragga: Calaamadaha, Noocyada, iyo Daaweynta Ka Hortagga | Ragga Stylish
Ragga Stylish | | Caafimaadka
In kasta oo kaadi mareenka Waxay ku badan tahay dumarka marka loo eego ragga, waxaan rabnaa inaan ka hortagno ka sameysano bartayada si looga fogaado infekshanka.
Si looga hortago, waa inaan marka hore ogaano waxa uu yahay cudurkaan iyo wuxuu ka kooban yahay.
1 Waa maxay infekshanka kaadida ee ragga?
2 Astaamaha infekshinka kaadida
3 Noocyada infekshannada kaadi-mareenka
4 Sidee looga hortagaa?
Waa maxay infekshanka kaadida ee ragga?
Infekshinka kaadi-mareenka waa jiritaanka jeermiska cudurada keena ee kaadida, sababo la xiriira infekshinka kaadi mareenka, kaadi haysta, kilyaha ama qanjirka 'prostate'.
Astaamaha infekshinka kaadida
In kasta oo infekshannada kaadidu badanaa astaan ​​ahaan u muuqdaan (astaamo aan lahayn), dadka qaar waxay leeyihiin:
xanuun iyo gubasho marka la kaajinayo
Kaadi joogto ah (xitaa isla marka ay kaadido)
xanuun iyo cuncun caloosha hoose.
Marka la eego astaamahan, dhakhtarku wuxuu weydiisanayaa falanqaynta kaadida iyo haddii joogitaanka leukocytes ee kaadida la xaqiijiyo, infekshanka kaadi-mareenka waa la xaqiijiyaa.
Noocyada infekshannada kaadi-mareenka
Marka loo eego meesha ugu muhiimsan ee marinka kaadi mareenka ee uu infekshanku ku yaal, waxaa loo tixgeliyaa:
Cudurka kaadi mareenka: Cudurka kaadi-mareenka oo ku yaal kaadi mareenka. Caabuq wuxuu ku dhacaa tuubada kaadida laga soo saaro jirka (kaadi mareenka). Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Urethral Syndrome'.
Cystitis: Waxay ku taalaa kaadiheysta kaadiheysta waana laga yaabaa ama ma soo bandhigi karto infekshan. Waa cudurka ugu badan ee ragga iyo dumarka ku dhaca.
Cudurka 'Pyelonephritis': Waxay ku taal kelyaha. Infekshan ayaa ku dhaca kelyaha iyo marinka kaadi mareenka (kaadi ka daadata kilyaha oo ku jirta kaadi haysta). Waa dhif in la dhaco.
Prostatitis: Waxay ku taal qanjirka 'prostate' Waxaa ka mid ah caabuq ku dhaca qanjirka 'prostate' iyo aagga ilmagaleenka. Tani waa mid gaar u ah ragga, maadaama haweenku aysan lahayn qanjirka 'prostate'.
Calaamadaha kansarka qanjidhka kaadi mareenka
Sidee looga hortagaa?
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka looga hortagayo infekshinka kaadi-mareenka:
La qabsado biyo badan cab maalin kasta. Xaqiiqda biyaha la cabbo, kaliya ma aha inay wax badan ka caawiso jirka laakiin waxay ka dhigeysaa marinka kaadi mareenka inuu iska nadiifiyo mar kasta oo aad kaadi doontid. 6 ilaa 8 koob oo biyo ah maalin walba ayaa ugufiican.
Waqti kasta oo aad galmo sameysid, u sheeg lamaanahaaga inuu gacmaha si fiican u dhaqo adigana waad sameysaa La xiriirida jeermiska ayaa ah waxyaabaha kale ee caanka ku ah UTI-yada. Sidoo kale, galmada kadib, samee nadaafad habboon.
Ka fogow dharka dhagan. Sidoo kale waa inaad joojisaa xirashada dharka hoose ee 'lincra' oo aad xirataa kaliya dharka hoose ee cudbiga. Markaad aadeyso xeebta, ha ku dheeraan suudh qoyan, maxaa yeelay waxay dhaawici doontaa aagga.
Haddii aad leedahay mid ka mid ah astaamaha kor ku xusan, ka dib la tasho dhakhtar si aad u bilawdid daaweyn si ay kaaga caawiso inaad ka gudubto cudurkaan kaadida ah ee ragga ku dhaca, in kasta oo ay sidoo kale tahay cudur ku dhici kara dumarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Waa maxay iyo sida looga hortago infekshinka kaadida ee ragga?
ugu hambalyee shaqada ay hayaan. Hagaag dhibaatadaydu waxay tahay waxaan dareemaa xanuun markaan kaadinayo waxaanan dareemayaa xanuun ku dhaca xubintayga xubinta taranka waxaan u maleeyay inaan xumaan leeyahay maxaa yeelay dhamaadka kaadida waxay u soo baxaan sida dhiig xinjirow ah laakiin leh biriq waxaanan doonayaa inaan kaadiyo laakiin markaan galo musqusha xanuunku wuu iga tagaa waan joojiyaa oo waan raaca xanuunka. Waan ku faraxsanahay jawaabtaada xirfadeed bye….
Waan ku faraxsanahay shaqadooda.Waxaan qabay cudurka kaadi-mareenka waxaan ku dhacay dawakhaad iyo rabitaan badan oo ah inaan kaadiyo.Markaan kaadiyo, waxyar baa i gubtay marwalba oo aan kaadiyona dareenka kaadida ma baxo, runti, Waxaan durba dareemay kaadi mudo 2 sano ah bilawgii waxaan qoraa ciprofloxacin hadii aan ka takhaluso infekshanka laakiin ma doonayo inaan aado musqusha si joogto ah, maya, xaqiiqdii markaan culusyahay ama xoogaa dadaal sameynayo waxaan dareemayaa in Kaadida ayaa soo baxda.Waxaan horey u booqday dhakhaatiirta iyo homeopaths mana aysan helin wax aan ku qanco jawaabta ay bixiyaan
JOSE RENE dijo
SALAAN SAAXIIB WAXAA JIRA CAADI BADAN, WAAD QAADAN KARTAA TODDOBAAD, QAADO BATOOLO, SI WAYN U WADA DHAQ, OO KA SOO CELI SHELADA IN SHELKU LAGU KARI DOONO GARXA JOJOOTO OO LA QAADO MAALINTII BIYO CAGAAR AH OO LA SOO ARAGO MARKASTA OO AAD TAGAY QAADKA
Kujawaab JOSE RENE
SALAAN. WAAD MAHADSANTAHAY INAAD IIGA SOO CESHAY SHAKI. Infekshinka kaadidu wuxuu saameyn ku yeelan karaa ragga markay tahay xiriir.
Ku jawaab Cyprian
dhul beereed july dijo
Waa salaaman tahay, waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo 15 jir ah, waan siigaystaa had iyo jeer laakiin hadda waxyar ayaan ka baqayaa maxaa yeelay waxay iga dhigeysaa inaan rabo inaan kaadiyo marar badan xitaa markaan dib u kaadiyo. Waan yara baqayaa.
Ku jawaab julio prado
Willmer medina dijo
Salaan magacaygu waa Wilmer Waxaan ahay 50 jir waxaan kuu soo qorayaa maxaa yeelay mudo laba bilood ah ayaan dhibaato ku qabay nidaamka kaadi mareenka waxaan u tagay dhaqtarka kaadi mareenka waxaan u sharaxay astaamahayga (xanuunka caloosha hoose ee kaadiheysta dhererkeeda iyo hoose qayb ka mid ah xiniinyaha iyo guska, gubashada markay kaadido, rabitaan joogto ah oo kaadi ah Waxaan aadaa musqusha marwalba marwalba waana sii wadaa inaan dareemo xanuun waa raaxo aan loo adkaysan karin) sidoo kale doc-ka ayaa ku hubsaday qanjirka 'prostate' taabashada, waxaa la igu sameeyay tijaabada 'prostate antigen test' , Echo caloosha iyo qanjirka 'prostatic echo' ayaa leh waxaan hayaa qanjirka 'prostate cyst' iyo doc-ka oo la ogaaday bararka qanjirka 'prostate' ee lagu ogaanayo qanjirka 'prostate'. Wuxuu sameeyay tijaabada socodka kaadida ee lagu ogaanayo cilad uu uqoray tamsulom iyo ifos antibiyootig 750 taas oo horeyba layga saaray qaar kamid ah raaxo darada weyn ee aan usii wado inaan si xoog ah u kaadiyo, waan sii gubanayaa markaan kaadiyo, xanuun joogto ah iyo rabitaankeyga inaan kaadiyo. Waa inaan sameeyaa daraasad kale, ma xasuusto magaca laakiin waa halka ay ku rakibaan kamarad si ay u arkaan gudaha kaadi mareenka iyo kaadi haysta, taas oo ay kugula talinayaan inaan cabbo dareere badan, halkan kuma qaadan tamsulon Venezuela macquul maahan
Jawaab Willmer Madiina
Manuel Maruqez dijo
Waad salaaman tahay, magaceygu ​​waa Manuel, waxaan haystaa 47 mudo 2 todobaad ah kaadi badan ayaan dareemayaa oo xoogaa raaxo la'aan ah meesha kaadidu ka soo baxdo waxaan raacay doc guud iyo badh oo ah antibiyootig iyo mudo 5 maalmood ah hadaan arko horumarin xitaa waan istaagayaa kaadi dhowr maalmood laakiin waxaan heystaa 3 maalmood xanaaqii ayaa soo laabtay, oo soo laaban doona, mar hore ayaan balan laqaatay dhakhtarka yuroolistaha, aad ayaan u walwalsanahay tan iyo yaraanteydii, marwalba waxaan ka fakaraa kansarka, ilaahay baa iibin doona
Jawaab manuel maruqez
Aad baan u kaadsanayay mudo 2 todobaad ah waxaan u tagay dhaqtarka guud wuxuu ii qoray antibayootig waxaan bilaabay inaan dareemo fiicnaan xitaa waan joojiyay inta badan kaadida laakiin 3 maalmood ka hor ayaan markale ku bilaabay astaamihi hore waxaan balan ugu qabtay dhakhtarka kaadi mareenka waxaan ahay aad u neerfa iyo hypochondriac anigu waxaan ahay 47 jir ilaahay baa iibiyey
Xoogaa waan baqayaa, usbuucyo ka hor waxaan u guuray cimilo aad uga qabow tayda oo xiniinyaha xanuunku wuu bilaabmay imikana waxaan dareemayaa kacsanaan badan oo ah inaan kaadiyo laakiin ma kaadin karo wax ka badan dhibco.
Qof baa sidaas oo kale sameeyay
Saddex fikradood oo muuqaal ah ayaa u safraya Kirismaskan
Noocyada loo yaqaan 'tuxedo' si loo tixgeliyo Sannadkan Cusub